Jejoo, le quotidien des femmes
En vente actuellement 27/11/2018
Letisia : Manampy manintsana tavy, mikolo ny fo sy vavony!
Efa manomboka hita eny an-tsena amin’izao vanim-potoana izao ny letisia. Voankazo tena tsara ho an’ny vatana izy itony. Ankoatra ny fiarovany ireo taova samihafa toy ny fo, ny vavony dia manampy amin’ny fampihenam-batana ihany koa izy ary tena ilain’ny vehivavy bevohoka.
1. Tany Malawi i Madonna sy ireo zanany enina no nankalaza ny « Thanksgiving ».
Nandefa sary niaraka tamin’ny zanany izy, izay tsy dia fanaony mihitsy. Narahiny hafatra mafonja sy feno fitiavana izany nentiny nilazana fa manan-danja be aminy ny zanany ary tsy mbola nanary azy hatramin’izay mihitsy. Efa 22 taona moa izao i Lourdes, zanany vavy matoa ary 6 taona kosa ireo kambana roavavy vao natsangany farany.
Mamerina ny nono fisaka sy miroraka ho dongadonga
Azo atao tsara ny manalehibe ny tratra na ny nono somary fisaka amin’ny alalan’ny fampihetseham-batana. Mila manao izany matetika fotsiny.
1. Ballerine pailletée: 96.000Ar – Sur commande Facebook “Hika Farany” 2. Sandale à brides - Sur commande Facebook « Kalajejou Tia Vao »
Lehilahy manolana ny vadiny, tsy azo avela fotsiny amin’izao !
Nomarihina ny 25 novambra lasa teo ny andro eran-tany ho famongorana ny herisetra atao amin’ny vehivavy, ary ao anatin’ny 16 andro, manomboka eo amin’io daty io hatramin’ny 10 desambra,
Ankizikely voan’ny homamiadana, niandry ny zandriny ho teraka vao maty
Efa nihombo sy niparitaka tamin’ny taova maro ny aretina nikiky ity ankizy lahikely 9 taona ity, vao fantatra fa voan’ny homamiadana izy.
Olona 6 nodimandry vokatry ny haitrano nahazo azy
Olona 6 no indray namoy ny ainy, vokatry ny hain-trano tany Soleure, Soisa ny alahady hifoha alatsinainy lasa teo. Nahatratra 20 isa kosa no naiditra hôpitaly vonjimaika.
Tovovavy manodidina ny 10 no nisy naka an-keriny, tany Niger
Tovovavy am-polony avy amin’ny tanàna maromaro ao atsimo atsinanan’i Niger no nisy naka an-keriny ny zoma alina lasa teo.
Misy olona mbola tsy hitako hatramin’izay,
fa mifanerasera amin’ny telefaonina fotsiny izahay, efa ho 4 volana izao. Resaka asa no niantombohany, fa avy eo izahay dia lasa mifanakaiky be. Tsara fanahy be izy, manambitamby ary niteny tamiko hoe mahafinaritra azy aho. Izaho koa toa lasa tia sy tsy mahafoy azy. Inona no ataoko ?
Manatsara kolesteroly, amin’ny fomba tsotra kely !
Maro be ny Malagasy no ampijalian’ny resaka kolesteroly. Azo arindra tsara amin’ny alalan’ny fomba natoraly anefa izany. Ireto ny tsara ho fantarina.
Une vie sans chocolat est une vie à laquelle manque l'essentiel. [ Marcia Colman et Frederic Morton ]
Paradisa kely, hono ny “chocolat” ary tsy misy vehivavy tsy mankafy azy. Ilay Amerikanina mpanao sary malaza, John G. Tullius aza moa dia nilaza hoe : Olona 9 amin’ny 10 no mankafy “chocolat”, ary mpandainga ilay faha-103.
Alarobia : Saosisy sy anandrano 8.500Ar
Akora ilaina · Saosisy ½ kg – 7.000Ar · Anandrano 1.000Ar · Voatabia sy tongolo, tongolo gasy
Kaokambra, manala kentrona sy tavy !
Legioma be rano izay ny kaokaombra. Nambara taminao tao anatin’ny fandaharana “Taiza vatana”, tao amin’ny “Top Radio” omaly, fa mitondra vokat-soa maro ho an’ny vatana izy ireny. Ireto atoro anao ireto àry ny atao mba hahazoana izany tombontsoa entiny izany.